Ihe ngosi nke LG V60 ThinQ agbapuwo ma gosiputa otutu ihe nke mobile | Gam akporosis
Ihe oyiyi nke LG V60 ThinQ emeela ka ekpughere ma gosipụta ọtụtụ atụmatụ nke ekwentị
El LG V60 ThinQ Ọ bụ otu n'ime smartphones ndị na-esote arụmọrụ dị elu ka ewepụtara na ahịa. Ngwaọrụ a ga - egosipụta ọtụtụ njirimara kacha mma na nkọwapụta teknụzụ na ụlọ ọrụ ahụ, ịbụ ọkọlọtọ na - esote akara South Korea.
Naanị awa ole na ole gara aga, a di na nwunye nke a sụgharịrị oyiyi nke ngwaọrụ e leaked, na-ekpughe ụfọdụ àgwà ndị ọ ga-aba uru. Ihe ndia edeputara ime ya.
Ihe oyiyi ndị anyị biputere n'okpuru bụ nke ndị ama ama bipụtara na mbụ ọnụ mmiri Evan Blass site na akaụntụ Twitter ya. Omume a kwuru banyere ya ekwentị ga-egosiputa quad igwefoto n'azụ modul. Yabụ, anyị ga-enweta nnukwu ihe mmetụta dị elu, oghere oghere dị obosara maka oke gbaa, igwefoto telephoto na macro shutter maka ịse foto na nso nso. Nke a dị ka ihe mmetụta sensọ anyị ga-enwe, mana ekwenyeghị ya. Ya mere, anyi kwesiri idozi maka imata ihe ekwuru.
N'aka nke ọzọ, Blass na-atụkwa aro nke ahụ LG V60 ThinQ ga-abụ ama nwere nnukwu batrị 5,000 mAh. N'ezie, nke a ga-ejikọta ya na nkwado maka teknụzụ na-agba ngwa ngwa, ọ bụ ezie na amataghị ikike ike a ga-abụ, ma ọ bụ na batrị ga-enwe ụgwọ ọzọ.
A ga-enwe ngosipụta a na-amịnyeghị n'ụdị mmiri iyi. Agbanyeghị, ọ nweghị ihe ekpughere banyere teknụzụ ya, obere ihe gbasara diagonal ya. N'agbanyeghị nke ahụ, anyị na-atụ anya ịhụ otu AMOLED panel nke nwere ihe ruru ihe ruru. 6.5-anụ ọhịa na QuadHD + mkpebi. Na mgbakwunye na nke a, ọ ga-enwe igwe okwu anọ dị n'akụkụ dị iche iche na ọdụ ụgbọ USB-C nke dị na ala, nke ọkà okwu na-agbanye na nkuku isi 3.5 mm.
LG Mobile na-akwado nnukwu ọghọm ya n'ihi enweghị ihe na ngalaba dị n'etiti
LG achọghị ịhapụ ozi ọ bụla gbasara V60 ThinQ, mana ekwuru ya na mbụ na enwere ike iweta ya na MWC20, ihe omume ga - eme ma emechaa ọnwa a, yana ọ nwere ike ịbịa nkwado 5G ma melite DualScreen. Ihe echiche a na-agbagha bụ na ụlọ ọrụ agaghị aga emume a n'ihi coronavirus.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ihe oyiyi nke LG V60 ThinQ emeela ka ekpughere ma gosipụta ọtụtụ atụmatụ nke ekwentị
Akwụkwọ mmado nkwado nke Honor 9X Lite na-egosi kamera azụ nke 48 MP
Nro abalị Huawei anaghị akwụsị: US na-ezube itinye iwu ndị ọzọ maka ndị nrụpụta China